venus1688: Roulette ရိုးလတ်နည်းဗျူဟာ
အွန်လိုင်းဂိမ်း၊ LIVE ကာစီနို၊ ဘောလုံးနှင့်အားကစား အမျိုးမျိုး အွန်လိုင်ဝန်ဆောင်မှု
ကစားနည်းတစ်ခုကို စတင်ကစားမယ့်ကစားသမားတွေဟာ အစပိုင်းမှာ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကစားရမလဲ၊ ဘာတွေလိုအပ်လဲ မသိရင် အချိန်တွေကုန်တဲ့အပြင် လောင်းကြေးငွေတွေလည်း ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရိုးလက်ကစားနည်း ကို စတင်ကစားမယ့် ကစားသမားတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့်အချက်အလက်လေးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
Roulette (ရိုးလတ်) စားပွဲကိုရောက်ပြီး သင့်ရဲ့လောင်းကြေးငွေတွေကိုမထည့်ခင် အနည်းဆုံး ၃ ပွဲလောက် အခြေအနေကြည့်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဂိမ်းရဲ့အခြေအနေကို သိနိုင်သလို သင့်ရဲ့နိုင်နိုင်ချေကို မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်မှုရှိလာတော့မှ လောင်းကြေးငွေထည့်ပြီး စတင်ကစားပါ။
Roulette စားပွဲတွေမှာ အနည်းဆုံးထည့်ရမယ့်လောင်းကြေးငွေပမာဏနဲ့ အများဆုံးထည့်နိုင်တဲ့ လောင်းကြေးငွေပမာဏတွေ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါကိုသတိပြုဖို့မမေ့ပါနဲ့။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လောင်းကြေးငွေထက်လျော့နည်းလျှင် လျော်ကြေးငွေရမှာမဟုတ်သလို သတ်မှတ်ထားတဲ့ လောင်းကြေးငွေပမာဏထက်ပိုသွားလျှင်လည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏအတိုင်းသာ လျော်ကြေးငွေ ရမှာပါ။ နစ်နာမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။
လူများတဲ့ Roulette စားပွဲတွေကိုရှောင်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် သင့်ကိုအချိန်လုံလုံလောက်လောက်ပေးတဲ့ စားပွဲတွေမှာကစားပါ။ ရိုးလက်ကစားနည်း ဟာ အခြားသော ဖဲဂိမ်းတွေနဲ့မတူပဲ လောင်းကြေးထည့်ဖို့ အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ ပွဲတစ်ပွဲပြီးဖို့လည်း အချိန်ကြာပါတယ်။ ကစားသမားများခြင်းဟာ သင့်စိတ်ကို ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သလို ဒိုင်ကလျော်ကြေးငွေပေးတဲ့အချိန်ကိုလည်း ကြာမြင့်စေပါတယ်။ လောင်းကြေးထည့်တဲ့အချိန် လုံလုံလောက်လောက် မရလျှင်လည်း သင့်အတွက် စဉ်းစားချိန်မရနိုင်ပါဘူး။
Rouletteကို မကစားခင် အနည်းဆုံး ဂိမ်းစည်းမျဉ်း၊ လျော်ကြေးအဆ၊ လောင်းကြေးပုံစံတွေကိုတော့ သိအောင်လုပ်ထားပါ။ ဒါကအခြေခံပါပဲ။
Rouletteရဲ့ Outside Bets တွေကို ဦးတည်ပြီးကစားပါ။ Inside Bets တွေအကြောင်း နားမလည်သေးခင် Inside Bets တွေကို လောင်းကြေးမထည့်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Winning Number ပေါက်အပြီး Markerကို မဖယ်ရသေးခင် လောင်းကြေးငွေအသစ်တွေ ထပ်ထည့်လို့မရပါဘူး။ လောင်းကြေးငွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် လျော်ကြေးငွေအားလုံးပေးအပြီး Markerကို ဖယ်အပြီးထိစောင့်ပါ။
ဒိုင်ကလောင်းကြေးထပ်ထည့်လို့မရပါလို့ ကြေငြာအပြီးမှာ လောင်းကြေးတွေထပ်မထည့်ပါနဲ့။ ဒီလိုကြေငြာအပြီးထပ်ထည့်လိုက်တဲ့လောင်းကြေးဟာ အကျုံးမဝင်ပါဘူး။
သင့်လောင်းကြေးကို သတ်မှတ်ထားပါ။ အနိုင်ဘယ်လောက်ရလျှင်တော်ပြီ၊ ဘယ်လောက်ရှုံးလျှင် တော်ပြီ ဆိုတာကို စိတ်ထဲမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။ ဒါက မလိုလားအပ်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလျော့နည်း စေပါတယ်။
Rouletteစားပွဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုဖတ်ပါ။ ကာစီနိုအများစုရဲ့စည်းမျဉ်းမှာ ကစားသမားနဲ့ အငြင်းပွားမှုဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိလျှင် ကာစီနို ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သာ အတည်ယူလေ့ရှိပါတယ်။
Betting Odd ဆိုတာဘာလဲ?
တောင်ပေါ်သား ရှမ်းကိုးမီး Application download https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skmtpt.shankoemee မြန်မာနို...
အွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်းတွေကို နည်းမှန်မှန်နဲ့ ဘယ်လိုကစားမလဲ?
အှနျလိုငျးဘောလုံးလိဒျကွီးမြားအပွငျအခွားလိဒျမြိုးစုံ ဝနျဆောငျမှု မနျဘာဝငျခွငျးဖွငျ့ 5000 သှငျး 5000 ဖရီးပရိုမိုးရှငျး မနျဘာဝငျရနျ ဤ viber : 0...
တောငျပျေါသားရှမျးကိုးမီး ပရိသတျတှအေတှကျအထူး Venus1688 မှာ ကစားနတေဲ့ မိတျသဈ/မိတျဟောငျးမြား တဈပတျတဈကွိမျ 1688 ယူနဈအထူးလကျဆောငျ။ ဂိမျးအကေ...
ရှမျးကိုးမီးဖဲဂိမျး နိုငျအောငျကစားနညျး မွနျမာနိုငျငံမှာ ကစားသူအမြား ဖဲဂိမျးတှနေဲ့ အှနျလိုငျး လောငျးကစားဂိမျး တှကေဘာတှဖွေဈမလဲ အတူတူ...
venus1688. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.